China zvakapetwa kaviri zvinogadzira michina yepelletizing vagadziri uye vanotengesa | Kupfuma Mashini
1. Conveyor: taura PP Pe firimu kana maflakes mu compactor / feeder. 2. Pe firimu compactor: kupwanya uye kumanikidza firimu, andfeedcompressed firimu mu extruder kumanikidzwa, kuita kuti iko kugadzirwa kugona kwakakwira uye kugadzikana.
Pellet yekugadzira michina /muchina / mutsara:
Feature uye RinoshandaPellet yekugadzira muchina :
Uyu mutsetse wepelletizing, kudzokororazve PP PE firimu, mabhegi, maflakes, zviite iwo mapellets.
Zvimiro zvezvikamu zviviri:
Danho rokutanga ndiye SHJ mapatya sikuruu extruder pasina kufa. Kubudikidza nekubatanidzwa kwedhiramu uye screw, iyo extruder inogona kushandisa kugona kwayo kwakasimba iyo therm sensibility zvinhu senge PVC inonyungudika, kusanganisa, kupatsanura nekuisa masimba pasi pemamiriro ezvinhu o o kumashure kumanikidza.
Chikamu chechipiri iSJ imwechete screw extruder. Nekuda kwekumhanya kutenderera kumhanya, inogona kuyerera, kusanganisa kureba uye kugadzira tambo zvakadzikama, ichidzivirira pamusoro pekupisa.
Yakakwira effciency pvc epurasitiki pellet inogadzira maviri danho granulation yekugadzira tambo ye tambo uye waya
1.metering feeder 2.vetical kumanikidza feeder 3.twin sikuruu extruder 4.single sikuruu extruder 5.air-kutonhora pelletizer 6.cyclone 7. kubikira mubhedha
Maitiro kuyerera Pellet yekugadzira muchina :
Conveyor → mbishi zvinhu compactor (feeder) → Inowedzera system → Die-musoro uye Yekumhanyisa Net kuchinjana sisitimu → mvura mhete pelletizing system / sosi mhando pelletizing system → yemvura muchina
Tsananguro yakadzama yemapepa ekugadzira michina:
1. Conveyor: svitsa PP Pe firimu kana maflakes mu compactor / feeder.
2. Pe firimu compactor: kupwanya uye kumanikidza firimu, andfeedcompressed firimu mu extruder kumanikidzwa, kuita kuti iko kugadzirwa kugona kwakakwira uye kugadzikana.
3.Extruding hurongwa: plasticizing zvinhu uye kunetesa gasi.
4.High speed Net kuchinjana system uye Die-musoro: firita zvinhu zvisina kuchena, kuita kuti kugadzirwa kugadzikane.
5.water mhete pelletizingsystem: kutema mapellets mumvura.
6. noodle mhando pelletizing system : kucheka kutonhora mapellets mushure watangi.
7.Dewater muchina: kuita Pellets yakaoma.
8.Vibrationsieve: bvisa badpellet uye chengeta yakanaka pellet.
9.Air Blower: kuendesa akanaka mapellets musiro.
10: Silo yekuchengetedza: chengeta pellet.
Maintechnical dhata yemapepa ekugadzira michina:
SJ150 pelletizing extrusion muchina
kumanikidza kudyisa pelletizing muchina